China HDPE biogas sheet Kugadzira uye Fekitori | Lonovae
Chigadzirwa Chigadzirwa Folding Crate-01 Dimension 600 * 400 * 110mm Kugona 24L ...
Chigadzirwa Chigadzirwa Muriwo michero yekupeta crate-LN01 Dimension 600 * 400 * 180m ...
Type Type (MM) Dymanic Kugona (T) Static Kugona (T) 1311 130 ...
Unyanzvi Dhata Sheet Dhizaina Zita PP Cellular Boarding Bhokisi / Kurongedza Bo ...
mapeji zinga zinga pane auto ...
Chigadzirwa Chigadzirwa Mota PP Cellular Bhodhi Ukobvu 3mm-5mm; 8mm; 10mm Upamhi ...
Iyo HDPE inogadzirwa nekambani yedu inonyanya kushandiswa mumadhamu ekuisira, madziva ehove, nenzvimbo dzese dzinofanirwa kusagadziriswa. Ukobvu hwemufirimu hunogona kuva 0.2-2.0 mm. Chikamu chakajairwa chikamu chiri 6 * 50 metres uye mazana matatu emamirimita. Iyo ukobvu ndeye 1 kusvika 0.8 mm. Yakakamurwa isapinda mvura bhodhi uye risingapindike membrane, zvigadzirwa: kusanganisira LDPE geomembrane, LDPE geomembrane, HDPE geomembrane, EVA geomembrane, ECB geomembrane, PVC geomembrane, rough surface geomembrane, nezvimwe.
Zita HDPE geomembrane
Upamhi 3m-8m （6m muchina）
Kureba 6-50m （sezvakagadzirwa）
Kuwandisa 950kg / m³
Zvishandiso HDPE / LDPE
Kushandisa Biogas, Padzi reHove uye Chakagadzirwa Nyanza nezvimwe.
1. HDPE geomembrane inogadziriswa isapinda mvura ine yakanyanya kukwana kukwana (1 × 10-17 cm / s);
2. HDPE geomembrane ine yakanaka kupisa kupisa uye kutonhora kuramba, uye kwayo kushandisa nharaunda tembiricha yakanyanya tembiricha 110 ℃, yakaderera tembiricha -70 ℃;
3. HDPE geomembrane ine yakanaka makemikari kugadzikana uye inogona kudzivisa kuora kwesimba asidi, alkali nemafuta. Iyo yakanaka anti-ngura zvinhu;
4. HDPE geomembrane ine yakasimba tensile simba, zvekuti ine yakasimba tensile simba yekuzadzisa izvo zvinodikanwa zvemhando yepamusoro-einjiniya mapurojekiti;
5. HDPE geomembrane ine yakasimba yekudzivirira mamiriro ekunze, yakasimba anti-kukwegura kuita, uye inogona kuchengetedza yekutanga kuita kana yafumurwa kwenguva yakareba;
6. Iko kushanda kwese kweHDPE geomembrane. HDPE geomembrane ine yakasimba tensile simba uye elongation panguva yekuzorora, iyo inogonesa HDPE geomembrane kuti ishandiswe pasi peakasiyana siyana akaomarara geological uye mamiriro ekunze. Gadziridza kune isina kukwana geological kugadzirisa, kusimba kwakasimba!
7. HDPE geomembrane inogadzirwa yemhando yepamusoro mhandara mapurasitiki uye kabhoni nhema matema haina chero zvinodzivirira. HDPE yanga ichishandiswa munyika yangu kutsiva PVC sechinhu chakasarudzika chemabhegi ekupakata chikafu uye yekunamatira firimu.
1 Anti-seepage mune landfills, sewage kana tsvina masara ekurapa nzvimbo.
2. Mahombekombe erwizi, madhamu emadhamu, madhayamu ekugezesa, madhishi etsvina uye nzvimbo dzekuchengetera mvura, migero, madziva (makomba, migodhi).
3. Iyo anti-seepage lining ye subways, dzimba dzepasi, tunnel uye tunnel.
4. Iyo nzira yemugwagwa nedzimwe nheyo zvine munyu uye zvinopesana nemaseji.
5. Embankment uye yakatwasuka anti-seepage chifukidziro pamberi peturu, yakatwasuka anti-seepage dura renheyo, kuvaka cofferdam, tsvina zvinhu yadhi.
6. Mvura yegungwa uye mvura yakachena mapurazi emvura.
7. Nheyo dzemigwagwa mikuru, migwagwa, uye njanji; hutete husina mvura yevhu rakakura uye loess inodonha.
8. Seepage kudzivirira kwedenga.
Pashure: Muriwo michero crate
Zvadaro: pp maseru bhodhi ye logistic
PP Manyowa Kubvisa Mabhandi